Voromahery : Manohana an’i Hery Rajaonarimampianina -
AccueilSongandinaVoromahery : Manohana an’i Hery Rajaonarimampianina
Voromahery : Manohana an’i Hery Rajaonarimampianina
Maro ireo resy lahatra amin’ny zava-bita sy ny fomba fitantanan’ny Filoham-pirenena am-perin’asa, Hery Rajaonarimampianina, nandritra ny efa-taona. Teraka, araka izany, ny Vondrona Miaro sy Manohana an’i Hery Rajaonarimampianina mitondra ny anarana Voromahery.
Notanterahina omaly, tetsy amin’ny Hotel Carlton Anosy ny lanonana fampahafantarana ny fijoroan’ity vovonana manohana ny Filoha am-perin’asa ity. Miisa fito ireo olona mpitarika azy ka anisan’izany i Avoko Rakotoarijaona, filoha nasionalin’ny antoko politika Madagasikara Afaka na ny Maf sady filoha nasionalin’ny kung-fu wisa eto Madagasikara. Ao ihany koa Ramatoa Lanto Rakotomavo, sekretera jeneralin’ny antoko TGV teo aloha, ary filohan’ny fikambanana Movma na ny Mouvement Visionnaire pour Madagascar. Manaraka azy ireo i Virapin Ramamonjisoa, filohan’ny Virapin Group. Ao ihany koa i Ntsoa Randriamifidimanana sy Andry Raobelina, mpandraharaha ara-toekarena. Tazana ao ihany koa Ratianarivo Gabriel, Ben’ny tanànan’i Moramanga teo aloha ary mpikambana eo anivon’ny Virapin Group. Mpikambana fahafito sady farany Ratsihoara Hariniaina, sekretera jeneralin’ny antoko Ampela Manao Politika sady filohan’ny fikambanana Kintana.
Amin’ny maha vondrona manohana ny Filoham-pirenena am-perin’asa ny Voromahery, mangataka ny firotsahan-kofidian’i Hery Rajaonarimampianina amin’ny fifidianana, ny 7 novambra izao, ireo mpikambana eo anivony. Hisy, araka izany ny fidinan’izy ireo ifotony manerana ny Nosy handresy lahatra ny mponina eny anivon’ny distrika, kaomina ary fokontany.
« Resy lahatra izahay tamin’ny asa vitan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina teto amin’ny firenena. Resy lahatra ihany koa izahay amin’ireo tetikasa mbola hotanterahina, izay tafiditra indrindra amin’ny vina Fisandratana 2030. Maniry ny hitohizan’ny asa fampandrosoana izahay satria efa manomboka mitraka i Madagasikara amin’izao fotoana izao”, hoy i Virapin Ramamonjisoa.
Raha ny fanazavan’izy ireo, dia tsy mialon-jafy ary tsy manavaka ity vondrona manohana ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ity. Afaka miditra ho mpikambana avokoa ireo mahatsapa sy resy lahatra amin’ny zava-bita sy ny mbola hotanterahin’ny Filoham-pirenena am-perin’asa. “Maro ihany koa anefa ireo leo sy tofoka politika ka te hiala ao anatin’ireo antoko misy azy ireny. Afaka manatevin-daharana ny Voromahery izy ireo, satria mety tsy maharesy lahatra azy ny antoko politika sy ny manodidina azy ireo fa i Hery Rajaonarimampianina irery ihany no maharesy lahatra dia miditra ho mpikambana manohana izy…”, hoy indray i Lanto Rakotomavo.
Tao anatin’izay efa-taona izay, dia nanomboka namiratra ara-toekarena i Madagasikara. Ho marik’izany, hoy ireo mpikambana eo anivon’ny Voromahery, ny fitomboan’ny harin-karem-pirenena. Anisan’ny manamarika ny fitantanan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa ny nivoahan’i Madagasikara tao anatin’ny sazy iraisam-pirenena, ka niverenan’ny fitokisan’ireo firenena vahiny indray ny mpitondra ankehitriny ka nahazoana famatsiam-bola maro, toa ny avy amin’ny Banky Iraisam-pirenena, ny Vondrona Eoropeanina, ireo Banky Eoropeanina sy Sinoa, ireo orinasa vahiny tsy miankina, sns.